Mpifaninana ho solontenan’ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin’ny filankevipitantanana GV 2020: Arzu Geybulla · Global Voices teny Malagasy
Mpifaninana ho solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny filankevipitantanana GV 2020: Arzu Geybulla
Voadika ny 05 Avrily 2020 7:36 GMT
Arzu Geybulla dia avy ao Baku, Azerbaijana saingy mipetraka any Istanbul, Tiorkia hatramin'ny 2010. Manoritsoritra ny tenany izy, ho “mpanoratra/ mpanao gazety miasa aminà ampaham-potoana, ary olombelona iray amin'ny fotoana rehetra.” Nanao tatitra momba an'i Azerbaijana izy nandritra ny fotoana maro naha-matianina azy, nahakasika karazana olana marobe, fa ny lohahevitra tena mampientanentana azy tato anatin'ny andro vitsivitsy dia ny fanaovana ampamoaka momba ny dindon'ireo teknolojian'ny tsy refesimandidy sy fanarahamaso. Betsaka amin'ireny asa ireny no azo jerena ao amin'ny Azerbaijan Internet Watch. Hatramin'ny May 2010 i Arzu no nandray anjara tato amin'ny GV.
Ireo rehetra nirotsaka ho fidiana ho ao anatin'ny filankevipitantanana 2020 dia nasaina namaly ireo andiana fanontaniana vitsivitsy eto ambany. Aza misalasala mametraka fanontaniana fanampiny amin'i Arzu atao ao anatin'ny toerana ho an'ny fanehoankevitra amin'ity lahatsoratra ity!
Inona no tena manintona anao indrindra hiditra hiasa ao anatin'ny filankevipitantanan'ny GV?
Raha ny zavatra niainako teo aloha, dia hitako ny fomba nahavitan'ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra nanampy tamin'ny firoboroboan'ireo fikambanana sy vondrompiarahamonina soloiny tena, ary hahazoan'izy ireny fankatoavana sy fahafahana miditra aminà loharano isankarazany. Rehefa tonga saina aho, tsy izay foana ny tranga misy, manantena hatrany anefa aho, ary tena mientanentana fatratra momba ny ho fahafahana ho lasa isan'ny ao anaty dingana hahatonga ny vondrompiarahamonina misy antsika hatanjaka kokoa, ho marintoerana sy haharitra.
Talenta, traikefa, fifandraisana, ary fahaizana manokana toa inona no ho atolotrao ny Global Voices amin'ny maha-solontenan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo anao?
Misalasala be aho hoe hisy zavatra vaovao ho azoko entina sy atolotra amin'ny maha-solontena ahy ao amin'ny filankevitra, indrindra raha jerena ny fivelatry ny fahalalàna omen'ny vondrompiarahamonintsika na ny nentin'ireo mpikambana teo aloha tao anaty filankevitra. Fa azoko antoka kosa hoe haiko ny mahandro sakafo tsara amin'ny fombandrazana azebaidjaney na mampiantrano ireo mpikambana avy ato amin'ny vondrompiarahamonitsika ka manana tsy fahazakàna sakafo. Avelantsika eo ny vazivazy fa, toka-miavaka ny vondrompiarahamonintsika, amin'ireo fahalalàna entin'ny tsirairay ho eo ambony latabatra (isan'izany ny fahaizana mahandro :). Ny tanjako sy ny traikefako dia izay asa nataoko nandritra ireo taona maro naha-mpikambana ahy tato anatin'ny vondrompiarahamonina, nefa koa ivelany – ny asa fanaovana gazety, fanangonambola, fametrahana tambajotra ary ny fisoloana vava.
Famatsiambola sy faharetana (ho lovainjafy).
Ireo loharano sy fahafahamanao omen'ilay sehatra ho an'ireo mangirika ny ho mpanoratra, artista, mpanao gazety manerana izao tontolo izao. Ny fahasamihafàna sy ny fiantraika aterak'ireo tantara marobe. Indraindray, mijanona fotsiny ho tantara mahafinaritra, mampihomehy anao. Indraindray zavatra tena miainga avy any anaty lalina any, izay mety hahatery anao hanampy na hitondra fanairana sy hanatevina fanentanana iray. Ny hamaroana sy ny fahasamihafàn'ireo tantara no mahatonga ity vondrompiarahamonina ity ho toka-miavaka sy mitohy mahazendana ahy amin'ny GV.
Inona no tianao hotsongaina avy amin'io traikefa miasa ho an'ny filankevipitantanana io, na amin'ny resaka asa izany, na ho an'ny tena manokana?
Ny fijerena akaiky ny fomba fiasa anatiny ato amin'ny GV ary raha toa ny fahatakarako manokana sy ny fahalalako ka ho afaka hanampy hampiroborobo ilay vondrompiarahamonina. Ny hitrandraka fahaizamanao ho an'ny GV mba ho lasa mpiaramiombona antoka mpiahy amina hetsika santatra sasantsasany ataonà faritra iray ary ho loharanom-pahalalàna ho an'ireo hetsika sanatatra hafa izay ny tanjona dia ny hitantara tantara, hampivoatra vondrompiarahamonina mpanoratra matanjaka sy hitondra fiovàna foana eto amin'izao tontolo izao na toa aza ka bitika kely izany.
Saika nandritra ny fotoana nisako aho no mpiasa tena. Nandritra io fotoana io, mino aho, mba nahazo izay fahalalàna faran'ny kely indrindra ilaina amin'ny resaka fandrindràna, fitantanana ny fotoana sy fandraisana andraikitra, tsy niankina tamin'ilay zavatra nataoko. Tsy handainga aho – fa angamba izaho no ilay olona mpanenjika ny fetra farany amin'ny fanaovana zavatra (hmmm, toy ity lahatsoratra fanentanana ity) saingy vitaiko foana amin'ny daty voatondro anefa 🙂
Ny ho mpitondra hafatra – angamba, mifidy fantsona iray mandeha tsara ho an'ny rehetra ary ahazoan'ny rehetra aina tsara sy azony antoka ny fampiasàna azy – mametraka io fantsona io sy ny loharano fototry ny fifaneraserana ary fihainoana izay rehetra voalaza – raha fintinina, GV ary GV ho an'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny vondrompiarahamoniny, ny fanehoankeviny, ny sosokeviny, ny hevitry ny mpikambana tsirairay ato anatin'ny vondrona no tiako homarihana ary antintranteriko amin'ireo sisa mpikambana ao anatin'ny filankevitra sy ireo mpitantana ny vondrompiarahamonina.
4 ora izayBlaogim-Piarahamonina GV